इटहरीकाे हिरा हाेटल : 'जसकाे नामै काफि छ' - Saptakoshionline
इटहरीकाे हिरा हाेटल : ‘जसकाे नामै काफि छ’
'मलाइ इटहरी नै अमेरीका जस्ताे लाग्छ '– युवा व्यवसायी महताे
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३१, २०७७ समय: ५:०७:४३
इटहरी ।पूर्व पश्चिम राजमार्गसंगै जोडीएर हिडनुपर्दा सेवा सुविधाले भरिपुर्ण सानदार होटल तथा लजहरू थुप्रै भुटिन्छन ।तर पनि इटहरीको हकमा हेर्ने हो भने ति लजहरू भन्दा बेग्लै पहिचान बनाएर बसेको हिरा होटलको सान बेग्लै देखिन्छ । शुद्ध साहाकारी खाना तथा खाजा घरकालागि यो होटल नेपालभरी प्रशिद्ध छ ।
भारतबाट आएका पाहुनाहरूकालागि पनि यो होटल नामि छ । शुद्ध साहाकारी खाना , सरसफाइ अनी होटलमा दिइने सेवा सुविधाले जो कोहि पनि खुशि देखिएका हुन्छन । बि.स. २०२८ सालमा स्थापित यस होटलले छोटो समयमै इटहरीमा बेग्लै पहिचान पाइसकेको छ । स्थापना कालदेखि यस होटललाइ स्वर्गीय हिरा महतोले सम्हाल्दै आएका थीए ।
उनको निधन पछि हाल उनका जेठा छोरा प्रकाश महतोले सम्हाल्दै आएका छन । अन्य होटलहरूको तुलनामा यस होटलमा सेवाग्राहिहरूको पनि बाक्लो जमात लाग्ने गरेको छ । महगो शुल्क तिरे पाउने सेवा सुविधा सस्तो मुल्यमा हिरा होटलले दिने गरेपछि प्राय यो होटल सेवाग्राहिहरूले भरिने गरेका छन ।
बाहिरी रूपमा हेर्दा होटल चलाउन सजिलो देखिएपनि भित्र धेरै कठीन रहेको सञ्चालक प्रकास महतो बताउछन । दैनिक सरसफाइ , भान्सा घर व्यवस्थापन , कर्मचारी खर्च देखि प्रसाशन खर्च समेत यहि होटलले धान्नु पर्छ उनि थप्छन ।
काे हुन प्रकास महताे ?
ब्यवसायी : प्रकास महताे
भनिन्छ परिश्रमले मान्छेलाइ एक दिन सफलताको शिखरमा पुर्याउछ र नयाँ परिचय दिन्छ । यो भनाइ अहिले इटहरीका युवा व्यवसायी प्रकास महतोसंग मेल खान पुग्छ । बाल्यकाल देखि नै गरेको संघर्षकै कारण अहिले उनको परिचय फेरीएको छ । इटहरीमा हिरा होटल एण्ड लज भनेर नाम नसुन्ने प्राय कोहि छैनन । यसको नाम नै काफी छ ।
सोहि हिरा होटलको सञ्चालकको रूपमा चिनिएका ब्याक्ति हुन युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी प्रकास महतो । जिवन संघर्ष हो भनेर परिचय दिने उनको दैनिकी आजभोली परिवएतन भएको छ । गत २०७६ माघ १२ गते बुवा हिरा महतोको स्वर्गवास भएपछि सबै जिम्मेवार आफ्नो काधमा लिएका महतो व्यवसायीक संगै राजनीतिक क्षेत्रमा समेत उत्तीकै सकृिय मानिन्छन । बि।स।२०३९ साल असारमा जन्मिएका व्यवसायी महतो इटहरी परिवारका जेठा छोरा हुन ।
एक त परिवारको जेठो त्यसमा पनि बुवाको स्वर्गरोहण पछि सबै जिम्मेवारी काधमा आउदा अझ ब्यवहारले परिपक्क बनाएको सुनाउछन । बाल्यकालमा इटहरीस्थित मोर्डन प्रिपेटरी इंग्लीस बोर्डीङ स्कुल अध्यन गरेको र २०५७ सालमा एसएलसी दिएर उच्च शिक्षाकालागि भारतस्थित दिल्ली पुगेका महतो दिल्लीबाटै व्यवसायमा पोख्त भएर नेपाल फर्किएको बताउछन । दिल्लीमा ःद्यब् अध्यन सकेर नेपाल फर्किएका महतोले लगत्तै आफ्नै लगानीमा न्यु हिरा होटल सञ्चालनमा ल्याए ।
होटल खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने मात्र नभइ उनले त्यहि होटलबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्येश्य साथ बिभिन्न भेज आइटमका तालिमहरू निशुल्क सञ्चालनमा ल्याए । निशुल्क तालिमहरूमा नान तन्दुरी , पनिर आइटम , डोसा , लगायत भेज आइटमहरूका परिकार बनाउन सिकाए ।
तालिम अवधिभर १५० भन्दा बढीले निशुल्क सेवा लिए । हाल उनिहरू नेपाल बाहिरका देशहरू जापान , कोरीया , अमेरीका , भारत , चीन , बंग्लादेश लगायतमा काम गरिरहेको र बेला बेलामा भिडियो कल गरेर आफुलाइ धन्यवाद दिने गरेको व्यवसायी महतो सुनाउछन । उनले सोहि होटलबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै ३५ भन्दा बढीलाइ रोजगारी समेत प्रदान गर्दै आएका छन ।
बाबुको देहान्तपछि इटहरीको मुख्य चौकमा अवस्थित हिरा होटल एण्ड लज समेत हाल उनैले सम्हाल्दै आएका छन । बि.स. २०२८ सालमा स्थापित यस होटलको बेग्लै महत्व र पहिचान छ । शुद्ध साहाकारी खाना तथा खाजा घरकालागि यो होटल नेपालभरी प्रशिद्ध छ । न्यु हिरा होटर एण्ड लज र हिरा होटल गरी हाल ३५ जना सम्म्लाइ रोजगारी दिदै आएको युवा व्यवसायी महतो बताउछन ।
धेरै युवाहरू अध्यन सकेर बैदेशिक रोजगारकालागि बिदेश पलायन हुन्छन तपाइलाइ चै बिदेश जान रहर लागेन ? भन्ने प्रश्नमा उनि सोझै भन्छन – ”मेरो लागि इटहरी नै अमेरिका हो । यहा जन्मन पाउनु म आफैलाइ भाग्यमानी ठान्छुू” दिल्लीमा बसेर अध्यन गरिरहदा पनि आफ्नो शहर इटहरी नसम्झिएको कुनै दिन थिएन उनी भन्छन ! दिल्लीमा रहदा उनले सामान्य होटल सञ्चालनको बारेमा जानकारी लिएर सिप सिक्ने मौका पाएको बताउछन । त्यहि सिपलाइ सदुपयोग गर्दै बाबुको ब्यवसायलाइ अघि बढाउने सपना सहित उनि नेपाल फर्केको र निरन्तर व्यवसायमा लागिरहेको महतो बताउछन ।
महतो व्यवसाय संगै राजनीति र समाजसेवामा पनि त्यतिकै सकृिय मानिन्छन । नेपाली कांग्रेस इटहरी नगर कमिटि अन्तरगत कृियाशिल सदसय समेत रहेका उनि समाजमा हुने बिभिन्न कार्यक्रमहरूमा सकृियता जनाउदै उपस्थिति हुन्छन । दानी र सबै संग मिल्ने ब्यवहार भएकै कारण इटहरीमा उनि सबैको प्यारो व्यवसायीपनि हुन । अरूको दुख देख्न नसक्ने र सहयोगी भावका महतो बाढी आएको बेला होस या कुनै प्राकृितक बिपत्ती किन नहोस इटहरी क्षेत्रमा रहेका पिडितहरूको खोजि गरी उनिहरूको उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न अग्रसर रहन्छन । गत ७३ साल साउनमा आएको भिषण बाढीबाट प्रत्यक्ष पिडित बनेकाहरूलाइ उनले आफ्नै होटलमा महिना दिन भन्दा बढी शरण दिएर आफ्नै लगानीमा खाना खुवाएर सामाजिक उद्धारता देखाएका थीए ।
व्यवसायमा लागेर छोटो समयमै समाजमा नयाँ परिचय बनाइसकेका महतो हाल आधा दर्जन भन्दा बढी सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध रहि काम गर्दै आएका छन ।महतो होटल व्यसाय संघ इटहरीको कृयाशिल सदस्य , नेपाल आदिवासी जनजाती अन्तरगत धानुक समाज इटहरी उपमहानगर कमिटिको सचिव , नेपाली कांग्रेस नगर कमिटि कृयाशिल सदस्य लगायतका संघ संस्थामा आवद्ध रहदै आएका छन ।